सबभन्दा दुःखी त छिमेकी देश भारत भयो। भुइँचालोले ध्वस्त मुलुकमा संविधान जारी भएको निहुँ पारेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदियो। उसका समर्थक दलहरूले त्यही नाकाबन्दीको समर्थन गरिदिए। संविधानलाई लिएर उत्पन्न त्यो द्वन्द्व आजपर्यन्त सुल्झिएको छैन। राजनीतिक द्वन्द्व निरुपण गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ जानुपर्ने हामी संविधानकै धाराहरूमा अल्मलिइरहेका छौं। उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा रहेका बेला हामी भने आफ्नै प्रगतिमा बन्चरो हान्दै एकपछि अर्को राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्दै गएका छौं। हुँदाहुँदा राजनीतिका नाममा विगतका गल्ती–कमजोरीलाई घृणाका रूपमा विकास गरिँदै छ। यस्तो घृणाको विकास गर्न हो भने आजको द्वन्द्व भोलिको पुस्तामा पनि सर्छ। पुस्तान्तर हुँदै जाने यो द्वन्द्वबाट हामी सामाजिक कायाकल्पको आशा राख्न सक्दैनौं। यसले निम्त्याउने भनेको गरिबी मात्र हो। सामाजिक पछौटेपन र झन्झन् अस्थिरता र अविकास मात्र हो। फाइदा त द्वन्द्वका ठेकेदार र हाम्रो अस्थिरताबाट आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ भजाउन माहिर विदेशीहरूलाई मात्र हुने हो। संसारभरिका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको अनुभवले यही देखाउँछ।
यथार्थ कुरा नपत्याउने वा वास्ता नगर्ने, बनावटी हल्लालाई विश्वास गरिहाल्ने संस्कारले नै हो, हामी आर्थिकदेखि राजनीतिक रूपमा पनि अहिलेसम्म ठगिँदै आएका छौं। हामीलाई सानैदेखि जीवनका यथार्थसँग आत्मसात् गर्न छाडेर बनावटी कुरा घोकाइन्छ। घोकेर वा चोरेरै भए पनि धेरै नम्बर ल्याउन सिकाइन्छ। वास्तविक जीवनमा एउटा निवेदन लेख्न लेखन्दास खोज्नुपर्ने, एउटा भिसा वा पुलिस रिपोर्टको फारम भर्न ‘परामर्शदाता’ खोज्नुपर्ने हुन्छ।परीक्षा दिने विद्यार्थीभन्दा उनीहरूलाई चिट चोराउन धेरै अभिभावक परीक्षा केन्द्रबाहिर ताँती लागेको टिठलाग्दो दृश्य देखिन्छ। चोर्नु हुँदैन वा कानुन तोड्नु हुँदैन भनेर सिकाइएको भए हामीले दलालको फन्दामा परेर ट्रकमा अमेरिका छिर्ने सपना देख्ने थिएनौं। हुँदाखाँदाको जागिर छाडेर युरोप छिर्ने लोभमा दलालको फन्दामा पर्ने थिएनौं। राजनीतिक नेतृत्वको नियत खुट्याउनसक्ने थियौं वा संविधान संशोधनबाट नै मुलुक विकसित हुने सपना पनि देख्ने थिएनौं।
चाहिनेभन्दा बढी राजनीति र द्वन्द्वमा भुलेर हामीले धेरै समय अभाव र पछौटेपनमा बितायौं। अब समय घर्किसक्यो, राजनीतिलाई नै ‘धर्म’ मान्ने प्रवृत्ति छाडेर सामाजिक उन्नतिको तस्बिर आँखा अगाडि सजाउँदै चुनावमा भोट हाल्ने बेला आएको छ। स्थानीय चुनावको मुखमा हामीले विगतका गल्ती–कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्ने हो भने मात्र देशको प्रगति सम्भव छ। इमानदार, निष्ठावान तथा उच्च नैतिक चरित्र भएकाहरूलाई नपत्याउने हो भने कहिल्यै प्रगति सम्भव छैन। यसको निम्ति हामीले इमानदार तथा निष्ठावान नेताको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। जस्तो– तपाईंको नेता कहाँ बस्छ? तपाईंकै क्षेत्रमा कि राजधानीमा? आम्दानीको स्रोत के हो? बालबच्चा कहाँ पढाउँछ? जीवनशैली कस्तो छ? नेता आफू काठमाडौंको महलमा बसेर आन्दोलनका नाममा गाउँलाई सुविधाबाट वञ्चित गराउँछ भने उसको सही नियत खुल्छ। हामीले जिन्दगीभरि नदेखेको ठाउँको प्रदेशको सीमामा बखेडा गरेर गाउँको प्रतिनिधि चुन्न बाधा गर्ने, समानताको वकालत गरेर आफू भने विलासी जिबन बिताइरहेको नेतालाई हामी किन स्वीकार गर्ने?
समाजमा द्वन्द्वको सिर्जनात्मक रूपान्तरण खेलकुद हो। पहिले भीषण युद्ध ब्यहोरेका देशहरू अहिले फुटबल लगायतका खेलको मैदानमा भिडिरहेका छन्। मेरा ती डच प्राध्यापकसँग पोखरामा रातिको खाना खाइरहँदा म सोचिरहेको थिएँ– के नेपालमा पनि राजविराज–११ र पोखरा–११ बीचको फुटबल टेलिभिजनमा युरोपियन लिगजस्तो हेर्न सम्भव नहोला र?
शुक्रबार, चैत्र १८, २०७३ १८:२६:४४